Misafidiana ny fakan-tsary mety amin'ny vatana | Vahaolana OMG
Marika fakan-tsary fakan-tsary any Singapore
Horonan-tsary fakan-tsarimihetsika amin'ny vatana
Rafitra fisorohana ny fahalavoana
Misafidiana ny fakan-tsary mety amin'ny vatana
The safidy fakan-tsary maro be azo alaina eny an-tsena dia mety hahatonga ny fisafidianana mety hitranga. Ilay mpanjifa aloha dia tokony hahafantatra aloha ny zavatra ilainy. Ohatra, firy ny firaketana firy no ilainy? Ahoana ny fomba tian'izy ireo hitafy ny fakan-tsary (izany hoe, satroka na soroka na tratrany ihany), mila mivantana mivantana na firaketana an-tsoratra fotsiny izy ireo, rafitra tsotra iray-mifanaraka-rafitra rehetra izay mifanohitra amin'ny rafitra maoderina izay mamela alaivo ny mety (ohatra. fakan-tsary ivelany), toetran'ny fiarovana toa ny fitrandrahana na ambaratonga fankatoavana samihafa, izay rafitra ampiasain'ny VMS, sns.
Most ny fakan-tsary miaraka amin'ny firaketana mialoha ny hetsika ary manomboka mirakitra aorian'ny nanosahan'ny mpampiasa bokotra iray. Ny endri-javatra hafa miely be dia be ny fanoratana ny horonantsary (mba hamerenana haingana haingana), hanamora ny fijerena ny fandraisam-peo an-tsary amin'ny fitaovana hafa (ohatra, fiara fitaterana polisy, foibe didy, tablety, sns). Ny tolotra iray hafa dia ny mandefa horonantsary amin'ny alàlan'ny 3G / 4G hanampiana ny fahatsiarovan-tena amin'ny toerana misy ny baiko sy ny fifehezana. Mino izahay fa ny ho avin'ity indostria ity dia miaraka amina fitambaran-tsoratra sy fandaharana mivantana.
Koa satria ny firaketana horonantsary momba ny fakantsary dia azo ampiasaina ho porofo mandritra ny fitsaràna ny fitsarana, ny orinasa dia tsy maintsy manamarina fa ny vokatra azony dia manaraka ny fehezan-dalàna samihafa mifandraika amin'ny fihazonana ny fahatokisan'ny porofo nomerika. Misy endri-javatra marobe marobe mba hahazoana antoka fa tsy fivahan'ny data. Ny haavon'ny fanohanana samihafa dia manome antoka fa ny polisy mitafy ny fakantsary dia tsy misy idiran'ny fampitahana ilay horonantsary, mamafa, na fanovana azy.
In Zepcam, ohatra, manana ambaratonga fahazoan-dàlana telo izahay: haavon'ny mpampiasa (mamela ny fandraisam-peo sy ny streaming mivantana fotsiny, fa tsy misy famafana na fidirana amin'ny rakitra voarakitra), superuser (izay mamela ny firaketana sy ny streaming mivantana, ary koa ny fahafaha-mamafa ny rakitra sy ny fidirana , rakitra voarakitra), ary ny haavon'ny mpitantana, izay manisy tombony ireo tombontsoa amin'ny fitantanan-draharaha eo ambonin'ny ambaratonga mpampiasa ambony.
hita manolotra fampidirana ireo horonan-tsary rehefa nampidirina tao amin'ny rafi-pitantanana video. Ireo rakitra dia azo jerena afa-tsy amin'ny solosaina nahazo alalana ary ny mpampiasa ihany no manana tenimiafina mety hanala ny fampidirana. Ny rafitra dia mitazona amboaram-peo mirakitra ny hetsika rehetra sy ny zava-nitranga natao tamin'ny fisie ao anaty rafitra nanomboka tamin'ny fotoana nanolorana azy sy nandritra ny androm-piainany. Ny takelaka fanamarinana dia mirakitra ny fotoana / datin'ny asa, ny mpampiasa izay nanatanteraka izany, ny solosaina izay nanaovana ilay hetsika ary ny famaritana ilay fihetsika. Endri-javatra fanampiny dia manome ny fahafaha manafina rakitra, izay azo ampiasaina rehefa nampidirina ireo fitaovana mandray andraikitra. Ny rakitra miafina dia tsy misy afa-tsy ny haavon'ny mpampiasa araka izay voafaritry ny mpitantana. Izany dia manampy amin'ny fiarovana bebe kokoa ny vaovao na dia ao anatin'ny departemantan'ny polisy aza.
Video Ny fandraisam-peo dia voatahiry matetika amin'ny fitaovana ary avy eo alefa avy any amin'ny toeram-pandraisan'ny tsangambato ao amin'ny tapany farany amin'ny fifandimbiasana - ny tobin'ny docking koa dia miantoka ny fakan-tsary ho an'ny fihodinana manaraka. Ho an'ny ankamaroan'ny modely, ireo mpampiasa farany dia afaka mifantina eo amin'ny fitahirizana sy fitahirizana rahona eo an-toerana. Na eo aza ny fahazoana ilay safidy, dia nifanaiky izahay fa ny ankamaroan'ny masoivoho mpampihatra lalàna dia manaintaina amin'ny fitahirizana ny vahaolana ao anaty rahona. Ny ankamaroan'ny mpanjifanay dia mampiasa fonosana feno fitehirizana eo an-toerana. Ny tombony azo amin'ny fitahirizana rahona dia ny rakitra azo tratrarina isaky ny toerana miaraka amin'ny Internet; na izany aza, io dia azo raisina ho fatiantoka amin'ny tsy fahampian'ny fiarovana ny angona.
Ny sasany Tsy milamina ny firenena miaraka amin'ireo angon-drakitr'izy ireo atao any amin'ireo ivon-dranon-tsambo any ivelany ary manana ny politikany marina izay tsy mamela izany. Misy ny tsy fahatakarana fa ny fitahirizana eo an-toerana dia afaka mitaky be loatra sy fitandremana bebe kokoa noho ny rahona rehefa mamorona angon-drakitra betsaka.
Vizucop ny Nanampy fanahiana bebe kokoa i Barnes: inona no mitranga amin'ny angona rehefa tapitra ny fifanarahana voalohany? Andao atao hoe manana fifanarahana telo taona ianao ary hitanao amin'ny mpamatsy iray mora vidy rehefa tapitra io. Afaka mamindra ny fampahalalana voatahiriny ve ny masoivoho?
Ny faran'izay miakatra ho liana amin'ny fakan-tsary amin'ny vatana sy ny vola azo tratrarina dia nitondra modely maro eny an-tsena. Ny mpividy dia tokony hahatsapa ary ho azo antoka fa mividy avy amin'ny mpanamboatra avo lenta izy ireo izay afaka manohana fanohanana mety.
ianao mila jerena ny faharetan'ny fakan-tsary, ny orinasa natsangana tsara na avy amin'ny olona mahita loharanom-bola mora vidy any amin'ny firenena vahiny izay tsy misy tohana. Lehibe ny serivisy mpanjifa amin'ity orinasa ity, mila fotoana famaliana haingana ny masoivoho ny fampiharana ny lalàna. Ka hihoarana ny mpamoaka fakantsary mora vidy, ny vidin'ny serivisy aorian'ny varotra no hanala ireo mpilalao kely kokoa.
Inona tokony hiditra ao an-tsaina ve ianao rehefa mahazo fakan-tsary? Ny masoivoho dia tokony hihevitra ny zava-drehetra avy amin'ny fitaovana mankany amin'ny rindranasa finday sy ny fizotry ny dingana rehetra mankany amin'ny fitsarana ka ao anatin'izany ny firaketana an-tsoratra ny firaketana lehibe, ny famerenana ny antsipirihany momba ny fahazoan-dàlana toy ny takelaka fahazoan-dàlana sy ny endrika, ny fizarana sy ny fitantanana ilay raharaha, sy ny fampisehoana ny horonantsary fandraisam-peo. Amporisihinay ny mpanjifa mba handinika ny kalitao tsy ny fakantsary vita amin'ny vatana ihany fa ny rafi-pitantanana manaporofo izay hameno ny angonin'izy ireo.
maro Ny serivisy vonjy taitra izao dia eo amin'ny andiany fahatelo na fahefatra amin'ny fividianana fakantsary Worn Body. Inona no tokony hoheverina ho vaovao? Manoro hevitra izahay fa ny mpividy dia tokony hanontany tena amin'ny tenany:
Mety amin'ny fangatahana ve ny fakantsary Worn Body?
Ahoana ny fomba hamadihanay ireo firaketana horonantsary nangonina tao amin'ny rafitra fitahirizana?
Ahoana no ahafahantsika mamerina manome ireo fitaovana ireo ary ilaina ny fikolokoloana?
Ahoana ny fomba hitantananay ny fahombiazana an-tsoratra: ny eo an-toerana na eo amin'ny rahona?
Ohatrinona ny tahan'ny vahaolana tsirairay ary inona no tsara sy ilany?
Ohatrinona ny vidin'ny Camera Camera?
Inona ireo fanomezan-kevitra mifandray amin'ny tsy fahampiana / fahatapahana?
A Ny fomba malina amin'ny fividianana dia farafahakeliny telo mpivarotra milahatra amin'ny orinasanao, manasaraka ireo singa telo lehibe amin'ny vahaolana momba ny fakan-tsarin'ny Vondron-tanana: ny fitaovana fakan-tsary (kalitao amin'ny haingam-pandeha, fampitaovana, fiainana amin'ny bateria, tanjaka, fiantohana ny fanoloana, ny fiampangana) ny vahaolana fitahirizana (tianao ny fitahirizana ao an-toerana na rahona? Ahoana no hikatsahanao ny rakitsary video? Firy ny olona afaka mahatratra ny fahazoan-dàlana? Mifanaraka amin'ny fenitry ny fitsaràna ny fitantanana porofo? Inona no drafitra hivoahanao raha te hanova ny mpamatsy ?) Ary avy eo ireo tsaramaso sy bolongan'ny varotra miharo (frank-bidy amidy, na fifanarahana isam-bolana? Ny vidin'ny kojakoja ve miaraka amin'ny vahaolana amin'ny fitahirizana?).
Zepcam's van der Aa dia manome soso-kevitra ny fampiasana ny rahona vahaolana mba tsy hanananao olana hananganana IT ao amin'ny fikambanananao - ary fantaro hoe aiza ny tena tombontsoa ao amin'ny fikambananareo. Noho izany, tokony manomboka manomboka mamolavola drafitra iray ianao amin'ny alokaloka.
ianao mety mila manatona mialoha, hoy ny soso-keviny. Eo amin'ny ho avy-porofo ve ny mpivarotra anao? Afaka mitazona fakantsary marobe kokoa ve izy? Vonona ho fanitsiana horonantsary na analytics ve izy? Azo apetraka amin'ny rafitra hafa ve izy io? Zava-dehibe ny fananana sehatra iray manana elastika.
ary mitadiava olona azonao atokisanao. Ny fanamarihan'i Pinnacle's Whitley: rehefa nihalalaka bebe kokoa ny fakan-tsary an'ny Body Worn, dia misy tondradrano vokatra mora kokoa. Raha hitanao ny vokatra iray miaraka amin'ny tsindry mavesatra, ny tena zava-misy dia azo inoana fa tsy hanao izany.
Hevitra fototra vitsivitsy tokony hotadidinao ao an-tsainao, inona no ezahinao ho azo tamina fakantsary lamba misy vatana? Mpanjifa marobe no tsy mihevitra fa alohan'ny hidirany. Miresaha amin'ireo mpanjifa mampiasa ny vokatra ary aza miditra amin'ity jamba ity.
Ahoana no hiheverana ny dosie lehibe sy ny tsy fividianana fakantsary vita amin'ny vatana.
Hevero ny fizotran'ny fanamafisana sy angon-drakitrao angoninao - mila rafitra iray izay afaka mitantana azy ianao ary manome antoka fa voatahiry ny rojotra porofo.
Izy io dia afaka mitantana azy ary manome antoka fa voatahiry ny rojo porofo.
Hevero ve ny fakantsary Body Worn nefa raha tsy ao amin'ny sehatry ny fiarovana ho an'ny daholobe ianao - raha matetika ny mpiasa ao amin'ny toe-javatra misy ny tenin'ny olona iray momba ny iray hafa dia afaka manohana volavolan-dalàna izy ireo ary manala ny fitondran-tena ratsy.
Mba hanatontosana ny fandaharam-panamoriana fiaramanidina iray mba hahatsapanao ny tombony sy ny asa takiana amin'ny famoahana ireo Kamera Body-Worn manerana ny fikambanana misy anao.
Aza adino ny mieritreritra ny ho avy –sora ho an'ny fiovana ny zavatra takinao ary raha toa ka ny elanelam-pizaranao dia ho tsara kokoa hanohanana azy ireo.
Aza misoratra anarana ao anaty tsipika miloko fa tsy mieritreritra na hidiranao any anaty mpivarotra marina na tsia.
At ny fiafaran'ny adihevitra nataontsika, dia manome hevitra avy amin'ny Michael Barsky Acting Superintendent any amin'ny Polisy ao Toronto. Notsipihiny fa raha misafidy vahaolana amin'ny fakantsary vita amin'ny vatana mety tsara amin'ny manodidina anao ianao, dia tsy maintsy heverinao aloha izay hataonao amin'ilay fitaovana. Vantany ianao dia nanapa-kevitra momba ny anton'ny fitaovana ao amin'ny tontolo iainananao, dia tokony hihaona amin'ireo tompon'andraikitra ao amin'ny sehatry ny zon'olombelona, ​​tsiambaratelo, ary ny fahalalahana vaovao, sendika sahaza, ary manenjika ireo mpisolovava. Ireo mpilalao fototra ireo dia hampahafantatra ny asanao, ary hitari-dalana anao amin'ny vahaolana mety, amin'ny alàlan'ny fiatrehana ny ahiahiny sy ny fitakiany.
Ny tarikao avy eo dia tokony hamaritra izay fepetra takiana heverinao fa anananao amin'ny haitao, anisan'izany ny fakan-tsary, rindrambaiko, fizotry ny fiaiken-keloka ary fitehirizana. Avy eo, ary avy eo vao apetraka tsara ianao hamaritana raha misy ny vahaolana mety amin'ny filanao, amin'ny vidiny mora.
Misafidiana ny fakan-tsary mety amin'ny vatana no farany niova: Oktobra 9th, 2019 by Admin
3436 Total Views 2 Views Today
↳ BWC104-W4 - Camera WIFI 4G Body Worn (Batterie azo esorina)
↳ BWA016-EC02 - OMG Lensa fakantsary ivelany an'ny OMG ho an'ny fakan-tsarimihetsika amin'ny vatana miaraka amina mpitazona headset
↳ BWA016-EC01 - OMG Lens fakantsary ivelany ho an'ny fakantsary amin'ny vatana
↳ BWA004-LBM - Kitapo Lanyard ho an'ny fakan-tsarimihetsika amin'ny vatana (Mini)
↳ BWA001-SH05 - Fehin-kibo amin'ny soroka miaraka amin'ny kitapo - Paosy
↳ Fakan-tsary mivantana mivantana mivantana (4G / WIFI)
↳ Horonan-tsary fakan-tsarimihetsika amin'ny vatana
↳ Fitaovana fakan-tsary ho an'ny vatana
↳ Fakan-tsary fakan-tsary / fakan-tsarimihetsika vita amin'ny vatana Singapore